७ वटा देशबाट ४ लाख नेपाली श्रमिकलाई ल्याउन सरकारको योजना के छ त ? - Malayakhabar
होम पेज कतार विशेष ७ वटा देशबाट ४ लाख नेपाली श्रमिकलाई ल्याउन सरकारको योजना के छ...
काठमाडौं := कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालीको लागी वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिने ७ वटा मुलुकबाट स्वदेश फर्किने चाहना भएका ४ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई नेपाल सरकारले सुरक्षित साथ स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना थालेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट मात्रै रोजगार गुमाएका ४ लाख ७ हजार नेपाली स्वदेश फर्किने आँकलन गरिएको छ।
कतिपय गन्तव्य मुलुकले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिक फिर्ता गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसैले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरुलाई फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाएका छन्। सो योजनामाथि अहिले कोभिड–१९ रोकथाम उच्चस्तरीय समितिमा छलफल समेत भइरहेको जनाइएको छ।
सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी कतारबाट ३ लाख ५१ हजार ८ सय ७२ जना श्रमिक रहेको मध्यको १ लाख ४५ हजार नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किने आंकलन गरिएको छ।
साउदी अरबबाट पनि एक लाख बढी श्रमिक फर्किने तथ्यांक त्यहाँको दूतावासले तयार गरेको छ। साउदीमा ३ लाख ५ हजार श्रमिक रहेकोमा भिसाको म्याद सकिएका कारण २० हजार र कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर १ लाख श्रमिक फर्किने छन्।
यस्तै कुवेत, बहराइन, र ओमानबाट पनि ठूलो संख्यामा नेपाली फर्किने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। कुवेतमा ५० हजार श्रमिक रहेकोमा २४ हजार फर्किने बहराइनमा रहेका ३५ हजार नेपालीमध्ये १० हजार ५ सय फर्किने आकलन गरिएको छ। ७ हजार नेपाली रहेको ओमानबाट पनि ३ हजार ५ सय नेपाली फर्किने त्यहाँस्थित दूतावासले जनाएको छ।
कसलाई प्राथमिकता दिने ?
दुवैतिर संयन्त्र बनाइने :
यो समितिको अध्यक्षता यातायात विभाग र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी प्रशासनले गर्ने क्ष्रोतले बतायो।
अघिल्लो लेख बिदेशमा रहेका ४५ लाख नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सजिलो छैन: प्रधानमन्त्री ओली।
पछिल्लो लेख दुई महिनाभित्र मलेसियामा ३८ नेपालीको मृत्यु/मृतकको शव पठाउन कति खर्च लाग्छ?